NK | के भिन्नता छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा ?
के भिन्नता छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा ?
देवप्रकाश त्रिपाठी/काठमाडौं :-
काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबीच कुनै प्रकारको भिन्नता नै नभएकोचाहिँ होइन । पहिलो भिन्नता त नामकै छ, दोस्रो भिन्नता नेताहरूको अनुहारको छ । तेस्रो भिन्नता उनीहरूका श्रीमती पनि भिन्नभिन्नै छन् । चौथो, काङ्ग्रेसका नेता एक्लै भ्रष्टाचारमा सामेल हुन्छन् र एक्लै खान्छन्, कम्युनिस्टका नेता मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन् र एक्लै भ्रष्टाचारमा सामेल भएको भए पनि मिलेर खान्छन् । पाँचौँ, काङ्ग्रेसका नेता विदेशबाट सीधै नगद ग्रहण गर्छन्, कम्युनिस्टहरू एनजीओमार्फत र सीधै दुवै तरिकाले नगद समेट्छन् । काङ्ग्रेसहरू उदार अर्थनीतिका नाममा लुटपाट गर्छन्, तर कम्युनिस्टहरू समाजवाद र क्रान्तिका नाममा लुट मच्चाउँछन्, यसलाई छैटौँ भिन्नता मान्न सकिन्छ । कम्युनिस्टहरू आफैँ हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन्, काङ्ग्रेसचाहिँ हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने र सत्तामा पुऱ्याउनेहरूसम्मका कार्य गर्छ ।
वि.सं. २०६३ को प्रायोजित परिवर्तनसँगै काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टबीचको आधारभूत अन्तरको अन्त्य भई केही रमाइला भिन्नताहरू मात्र बाँकी रहेका छन् । त्यसैले काङ्ग्रेसले आफूलाई कम्युनिस्टको विकल्प दाबी गर्ने हक गुमाइसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राँगोबाट गाडा तान्ने कि गोरुबाट भन्ने स्थिति अहिले नेपाली राजनीतिमा छैन, कालो गोरुबाट गाडा तान्ने या माले गोरुबाट भनी रोज्न पाउने स्तरको राजनीति यतिबेला नेपालमा चलिरहेको छ । जुन रङको गोरुले गाडा ताने पनि परिणाम एउटै हो भन्नेचाहिँ हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौँ ।